Xasuus: Mar Ay Dhacday Deepika Padkone Inee Dhahdo” Waxaan Rabaa Caruur Badan Inaan Dhalo Kahor Intaan Dhimanin” – Filimside.net
Xasuus: Mar Ay Dhacday Deepika Padkone Inee Dhahdo” Waxaan Rabaa Caruur Badan Inaan Dhalo Kahor Intaan Dhimanin”
Atirishada Deepika Padukone ayaa sanadkii hore wareysi caalami ah bixisay waxayna ku cadeysay wareysigan in ya jeclaan lahed inta aysan dhiman kahor caruur badan inee dhasho.
Bollywood Diva Deepika Padukone aya wareeysi xiiso badan siisey wariyaha caanka ah Rajeev Masand. Deepika aya loo bandhigey baaquli kujiro suaalo taageraheda ey ugu tala galeen iney weydiiyan.
Quruxleydan baaquliga intey gacanta geliso warqadaha sualaha kuqoran midba mar kajawabeyse Suaalaha xiisaha badan ee Deepika loo bandhigey aya waxa kamid aha xanta ugu yaabka badan ey xidigtan laga wariye.
Dee aya inta ey qososhey waxa ey kujawabtey xanta ah marki lagasheegey in xidigtan ey isticmasho daawoyinka LA isku cadeeyo. Waxey intaasi raacisey in xantaasi ey been tahay oo ana isticmalin dawoyinkasi.
Deepika aya sido kale kajawaabtey suasha ah waxa ey jeceshahay iney sameyso kahor inta ey dhiman xidigtan aya sheegtey iney jeceshahay ilmo badan iney dhasho dhimashadeeda kahor. Deepika aya arintan horey uga hadashey showga caalamiga ah ee Ellen Degenerous.
Dabcan lamaanaha DeepVeer howl culus ayaa u taalo maadama Deepika riyooyinkeda kamid yihiin kahor inta aysan geeriyon inee dhasho caruur badan oo ay hooyo u tahay xili xanta uur inee leedahay bilaawatay inkastoo ay inkirtay xidigtaan wararkaas.